Nordwind Airlines waxay dib u bilaabaysaa duulimaadkii tooska ahaa ee St. Petersburg ilaa Stuttgart
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Nordwind Airlines waxay dib u bilaabaysaa duulimaadkii tooska ahaa ee St. Petersburg ilaa Stuttgart
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Adeegga hawada ee u dhexeeya St. Petersburg iyo Stuttgart wuxuu furmi doonaa laga bilaabo Ogosto 22 -keeda Axadaha.
Nordwind Airlines ayaa sidoo kale bilaabi doonta duulimaad Hannover laga bilaabo 18ka Ogosto.
Nordwind Airlines ayaa bilaabi doonta duullimaad ay ku tagi doonto Frankfurt am Main laga bilaabo Ogosto 19.
Duulimaadyada Hannover waxaa la samayn doonaa toddobaad kasta Arbacada iyo Frankfurt am Main Khamiista.
Northern Capital Gateway, shirkadda maamulka ee Madaarka Pulkovo ee St. Petersburg, Russia ayaa ku dhawaaqday in side Ruush firaaqada Nordwind Airlines waxay bilaabi doontaa duulimaadyo toos ah garoonka Pulkovo Airport ilaa Stuttgart ee Jarmalka laga bilaabo Ogosto 22, 2021.
“Adeegga hawada ee u dhexeeya St. Petersburg iyo Stuttgart wuxuu furmi doonaa laga bilaabo Ogosto 22 -keeda Axadaha. Waqtiga duulimaadku wuxuu noqon doonaa ilaa saddex saacadood, ”ayay tiri shirkaddu.
Tani waa goob cusub oo loogu talagalay garoonka diyaaradaha ilaa iyo markii la soo rogay xannibaado la xiriira coronavirus, adeegga saxaafadda ee Waqooyiga Capital Gateway ayaa sidaas yidhi.
Nordwind Airlines ayaa sidoo kale bilaabi doonta laba duullimaad oo kale oo jadwal u ah Jarmalka, Hannover laga bilaabo 18ka Ogosto iyo Frankfurt am Main laga bilaabo Ogosto 19.
Duulimaadyada Hannover waxaa la shaqeyn doonaa toddobaad walba Arbacada iyo Frankfurt am Main Khamiista.